Ukukhutshelwa kweaudiyo nevidiyo kwenziwa ngokulula: I-Speechpad | Martech Zone
NgoLwesine, uJanuwari 31, 2013 NgoLwesithathu, nge-30 kaJanuwari 2013 Douglas Karr
Xa sele sibhale malunga Ukulungiswa kwe-YouTube Kwixesha elidlulileyo, elinye lamaqhosha lalinenkcazo eneenkcukacha. I-YouTube ayikhupheli umatshini kwaye itolike i-verbiage kwividiyo yakho (okwangoku), ke ukuxhomekeka kulwazi oluneenkcukacha kwinkcazo yevidiyo yakho kusabalulekile.
UJay Baer we Qinisekisa kunye nokuguqula cetyiswa Iphedi yokuthetha kuthi. Barekhodile ngaphezulu kwemizuzu eyi-1,230,645 yeaudiyo nevidiyo yabathengi abakhulu nabancinci.
Isebenza njani iSpeechpad
Dala i-akhawunti -Ukuze ufumane ukukhutshelwa kweefayile zakho zomsindo okanye zevidiyo kuya kufuneka kuqala wenze iakhawunti. Ukwenza iakhawunti kuthatha ngaphantsi kwemizuzwana engama-30; igama, idilesi ye-imeyile kunye negama lokugqitha. Yiyo leyo.
Ngenisa iifayile zakho -Umva kokuba uyenzile iakhawunti yakho, ungalayisha iifayile ngqo kwikhompyuter yakho okanye ukhombe iifayile esele zikwi-intanethi. Ungalayisha iifayile ngexesha elinye okanye uninzi njengoko ungathanda kukhuphelo olunye. Okwangoku baxhasa ezi fomathi zeefayile zeaudiyo kunye nevidiyo: aac, aif, aiff, amr, au, avi, cda, dct, dss, gsm, flac, flv, m4a, m4v, mpeg, mpg, mid, mov, mp2, mp3 , mp4, mpga, ogg, eluhlaza, shn, sri, ividiyo, vox, wav, wma, kunye ne-wmv.
Faka i-ODA -Emva kokuba ulayishe iifayile zakho konke okufuneka ukwenze ubazise xa ungathanda ukuba ukhuphelo lwakho lwenziwe. Banikezela ngeendlela ezintathu zokutshintsha ixesha: Iveki enye ($ 1.00 / umzuzu), iiyure ezingama-48 ($ 1.50 / umzuzu) kunye neeYure ezingama-24 ($ 2.50 / ngomzuzu)
Ngokukhawuleza ukuba ungathanda ukukhutshelwa kwenziwe, kokukhona kubiza kakhulu; ayothusi apho. Nokuba liza kwenzeka nini ixesha, uya kuhlala usazi NGOKUQWALASELEYO ukuba umbhalo ngamnye uza kubiza malini ngaphambi kokuba ufake iodolo yakho. Akukho mali ifihliweyo, ixesha.
tags: Ukukhutshelwa komsindoIphedi yokuthethaukubhaliselwaUkukhutshelwa kwevidiyo
Feb 4, 2013 ngo-8: 08 AM
Ndiyakwazi ukungqina, iSpeechpad yinkonzo entle enendawo ecocekileyo, elula kunye nenkonzo ethembekileyo ekhawulezayo. Sizisebenzisa rhoqo.
Feb 5, 2013 ngo-9: 08 AM
Ndiyayithanda iSomlomoText ngcono ngenxa yokudityaniswa kwabo ngokulula neYouTube. Banesixhobo esicocekileyo sokunxibelelana esinokusisebenzisa xa ushumeka ividiyo ekhutshelweyo kwiibhlog zakho.
Jan 9, 2014 kwi-4: 48 AM
Ndiqaphele into enye abayichazileyo ukuba eyona ndleko iphantsi yeenkonzo zokukhutshelwa, ayilungelanga iYouTube, Vimeo. Ngaba oko kuthetha ukuba kufuneka sikhethe isicwangciso esiphezulu?
Jul 13, 2015 ngo-9: 57 AM
Ngemveliso ye-Speechpad's $ 1 / ngomzuzu, ufumana ukhuphelo ngaphandle kwezitampu zexesha. Ukuba ufuna imibhalo engezantsi enokungeniswa kwi-youtube, kufuneka u-odole amazwibela (ukuqala nge $ 1.50 / ngomzuzu). Lixabiso elihle umgangatho olifumanayo.